Khilaafkii issimada Puntland oo la xalliyey. – Radio Daljir
Agoosto 18, 2012 3:13 b 0
Muqdisho, Aug 17 – Guddigii loo xilsaaray xallinta khilaafkii issimada Puntland ee ka unkabay cidda leh xulidda ergooyinka ansixinta dastuurka iyo xildhibaannada cusub ee baarlamaanka ayaa lagu soo warramayaa in xal-buuxa laga gaaray kaddib markii muddo lagu hawlanaa turxaan bixin arrinkaasi ku aaddan.
Guddiga xillinta khilaafka oo ka koobnaa saddex xubnood oo ka mid ah issimada Puntland, kala ahaana Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan Maxamuud, Ugaas Xassan Ugaas Yaasiin iyo Buraan Boqor Muuse, ayaa soo saaray war-murtiyeed ku aaddan go’aan ka gaariddooda is-maandhaafkii taagnaa sida ay noo xaqiijiyeen ilo-wareeddo kala duwan aadna ugu dhuun-daloolay hawlaha xal-ka-gaarineed ee arrinkaasi issimada Puntland.
Go’aan gaaridda issimada xallinta khilaaf, ayaa taageertay qaabkii qoondayneed ee issimada ku sugan magaalada Muqdisho, soona jeediyey xuliddoodu in ay tahay midda rasmiga ah ee la raad-raacyo, waxaana qaabkaasi turxaan-bixineed iyana aqbalay R/wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas iyo m/weynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ‘Faroole’, taasoo ka dhigan in laga tallaabay mad-madawgii issimada Puntland ka dhax-muuqday.
Arrinka haatan xalkiisa la gaaray ayaa waxaa ka maqan oo kaliya issimada gobolka Sool, kuwaasi oo iyana si tan la mid ah la sheegay in loo maarayn doono laguna hawllan yahay xilligaan guda-galideed xaleed.
Khilaafka issimada Puntland ee la tilmaamayo in maaro loo helay, ayaa ka aloosmay soo jeedin ka timid saxiixayaashii Road-map-ka, taasoo bidhaaminaysay xulidda ergooyinka ansixinta dastuurka iyo mudanayaasha in ay leeyihiin issimada soo jireenka ah ee Soomaalida, waxaana ay abuurtay tuhumo iyo kala taagnaan dhaqameed, iyadoo beelaha qaar ay u turjunteen hindisahaasi in uu yahay mid meesha looga saarayo issimadooda.